မမသီရိ: April 2009
အချစ်ကြီးလို့.. အပြစ်ကြီး ထင်
အငြိုးဝင် ချစ်သူလှ ကို
ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ ထံမှာ
လွမ်း တသသ နဲ့
ဝေမျှကာ ယူခဲ့ဖူး သလို..
သေပွဲကို အတူ နွှဲ ပြီး
အသဲ နှစ်ခါ ကွဲ တာတောင်
သတ်မှတ်တယ်.. လူ့ သမိုင်းမှာ
သုဘဒ္ဒါ ဒေ၀ီလေး ရယ်
Posted by မမသီရိ at 4/26/2009 07:00:00 PM
မြတ်နိုး နှောင်ရစ်.. အချစ်စစ်မို့..
မောင် ရဲ့ ပါးကို နမ်းစေလိုလဲ
ဖြစ်လေမလား.. အတွေးများ နဲ့
ဖွဖွ လေး ပဲ နမ်းချင်သူ...။
အကြင်နာသစ် မြတ်နိုး ချစ်မို့
ရင်ခွင် မှီ နွဲ့.. သွဲ့ သွဲ့ တေးဆို
ဣတ္ထိယ ဖြစ် .. မနှစ်သက်ချင်
ဖ၀ါးနုနု သွေးခြေ ဥစေ
ချစ်သဲ ပင်ပန်း နွမ်းမှာ စိုးတယ်
ချစ်သူ အဖော် ရှိနေသော်က
မောင့် ကို သိပ်ချစ်လို့ပါကွယ်....။
Posted by မမသီရိ at 4/21/2009 06:37:00 PM
နောက်ကွယ်က စကားလေး တခွန်း
နမ်းခွင့် ကျမ ရခဲ့ ပြီ...
တဆတ်ဆတ် ခုန်နေတဲ့ နှလုံးသွေး
ပါးလေးတွေ လဲ နီ ပေါ့..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျမ အပျော်ဆုံး
ချစ်သူ.. ချစ်တယ် ပြောလာလို့....။
Posted by မမသီရိ at 4/17/2009 05:38:00 PM
ပိတောက်ရနံ့ ရင်လုံး နှံ့စေ
(ဒီပို့စ်လေး ကို schedule လုပ်ပြီး တင်ထားတာပါ..ကျမ ခရီးဝေး ရောက်နေပေမဲ့.. ဘလော့ထဲက မိတ်ဆွေ အားလုံးကို သတိရလွမ်းဆွတ်နေပါမယ်..။ ဒီကဗျာလေးက ၂၀၀၉ ခရစ် နှစ်သစ်ကူး မှာ ချစ်ခင်ရသူ တယောက် အတွက်လက်ဆောင် ပေးထားခဲ့ တဲ့ကဗျာလေးပါ.. ခုတော့သူ့ဆီခွင့်တောင်း. မြန်မာနှစ်သစ်ကူးနဲ့ ညီအောင် အသစ်နဲနဲ ပြင်ရေးပြီးတော့ဘလော့မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.. မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တွေ အားလုံး. မြန်မာ နှစ်သစ်ကူးမှာ .ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ)
ပြီးတော့.. နောက်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာ တချို့ လဲ ပဲ schedule လုပ်ပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်..
ကျမ မရှိလို့ဧည့်ဝတ်ကျေနိုင်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့..
မမသီရိ ကိုမေ့မသွားကြအောင်လို့လူလည် ကျတာပါ...း) . ကျမ မရှိပေမဲ့ ကျမရဲ့ ကဗျာလေးတွေက မိတ်ဆွေတွေ ကို.. နွေးထွေး မှုတွေ ပေးနိုင်စေဘို့.. ဆန္ဒ ပြုလိုက်ပါတယ်..
အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ .. မမသီရိ ... 10.4.2009 7:14 pm
Posted by မမသီရိ at 4/12/2009 07:09:00 PM